Seychelles njem nlegharị anya na-enwe nzukọ azụmaahịa mbụ nke 2022
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Seychelles » Seychelles njem nlegharị anya na-enwe nzukọ azụmaahịa mbụ nke 2022
Njem nlegharị anya Seychelles ebidola afọ ahụ site na ntụle izu abụọ dịka nke Mọnde, Jenụwarị 24, 2022, ya na ndị mmekọ obodo na mba ụwa na atụmatụ ahịa ya maka afọ.
Ememe nleba anya kwa afọ, nke afọ a na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, n'ụdị webinar dị n'ịntanetị site na ikpo okwu nzụkọ ịntanetị ZOOM, bụ n'ịchịkọta echiche na nkwupụta sitere n'aka ndị mmekọ ahịa mpaghara na atụmatụ ịre ahịa ebe ebe a na-aga.
Otu n'ime ihe omume kacha ewu ewu maka ndị nnọchi anya njem nlegharị anya na Seychelles na mba ofesi, nzukọ a na-ejikọ ndị mmekọ iji kparịta okwu dị iche iche metụtara ahịa nke ebe 2022.
Ebe njem ahụ, nke dekọtara ndị ọbịa 182,849 bịara na 2021, mmụba nke 59% ma e jiri ya tụnyere 2020, nwetara dị ka ọnụ ọgụgụ nwa oge nke Central Bank nyere, atụmatụ $ 309 nde na otu onye ọbịa na-emefu USD1,693. Ọ na-achọ ịdọta n'etiti ndị ọbịa 218,000 ruo 258,000 yana otu onye ọbịa na-emefu USD1,800 na 2022.
Na nnọkọ ahụ, Mịnịsta na-ahụ maka ihe gbasara mba ofesi na njem nlegharị anya bụ Maazị Sylvestre Radegonde, onye ya na onye isi ode akwụkwọ na-ahụ maka njem nlegharị anya bụ Oriakụ Sherin Francis kwuru okwu dị mkpa.
N'okwu ya, Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya gbara ndị mmekọ ume ka ha lekwasị anya n'ịkwalite profaịlụ ebe ebe a na-aga.
“Ka anyị lelee ngwaahịa na ọrụ anyị na-enye ndị ọbịa anyị. Ọ bụghị ihe nzuzo na ọchịchọ nke ndị ọbịa na ndị njem anyị agbanweela. Oku nke oke osimiri, anyanwụ na aja agakwaghị ezuru onwe ha. Nke a na-enye nnukwu ohere maka Seychelles. Anyị chọrọ ịkwado echiche ọhụrụ na ndị batara ọhụrụ na njem nlegharị anya. Gọọmenti na-emepụta gburugburu ebe obibi ma na-eme ka mgbanwe dị iche iche dị iche iche, mana ọ bụ gị ndị ọchụnta ego na ndị ọchụnta ego ga-egosirịrị agụụ maka ya, "Minista Radegonde kwuru.
Onye isi ode akwụkwọ maka njem nlegharị anya chetaara ndị niile sonyere na njem njem Seychelles otu na-agbasi mbọ ike na ebumnuche ya nke ịnya mgbake akụ na ụba Seychelles ma na-agbaso ebumnuche nkwado ya.
“Ka anyị na-agbake n'ụjọ nke ọrịa na-efe efe, ka anyị ghara ichefu na anyị nọkwa n'ọsọ maka nlanarị anyị. Seychelles bụ mba ebe mmadụ abụọ n'ime ezinụlọ ọ bụla na-enweta ihe e ji ebi ndụ site na ụlọ ọrụ njem na ebe ụlọ ọrụ a dabere na ịma mma okike ya na ezigbo ihu igwe. Anyị agaghị echefu mkpa ọ dị idobe nkwado ndabere na ebumnuche anyị,” Oriakụ Francis kwuru.
Ọ gara n'ihu kwuo na mbọ otu ndị niile na-arụkọ ọrụ gụnyere gọọmentị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ mere ka ebe a na-aga nwetaghachi ihe dịka 50% nke azụmahịa ya na 2019, bụ nke na-anọgide na mba kachasị mma n'afọ n'ihe banyere ọnụọgụ mbata njem nlegharị anya.
Ndụmọdụ ahụ gosipụtara ihe ngosi sitere n'aka onye isi ụlọ ọrụ maka ahịa ahịa Oriakụ Bernadette Willemin na onye isi ngalaba maka atụmatụ atụmatụ na mmepe, Mr. Paul Lebon.
N'akụkụ nke ya, Oriakụ Willemin ekwuola na ọnụ ọgụgụ mbata onye ọbịa ahụ maka 2021 bụ ihe agbamume nke ukwuu. O kwuru na n'ime ihe ịma aka ebe ebe a na-aga na-eche ihu n'ihi ihe gbasara ịdị ọcha zuru ụwa ọnụ, otu a ga-elekwasị anya na mbọ ya n'ịbawanye ebe ebe ahụ site na atụmatụ dị iche iche.
"Na nkenke, anyị na-elekwasị anya na mbọ anyị na-ere ahịa n'ịbawanye Pọtụfoliyo anyị na-echebara isi mmalite nke akụkụ ndị ahịa ma na-agbanwekwa ahịa anyị ndị ọzọ na-enweghị ileghara itinye ego anyị na ahịa omenala anyị anya. Anyị kwenyere na Seychelles nwere akụkọ mara mma ịkọ na maka nke ahụ, anyị ga-achọ ịnyefe nke ọma, iji hazie ahịa anyị iji hụ na anyị ji ozi ziri ezi rute ndị na-ege anyị ntị na n'oge kwesịrị ekwesị, "Onye isi nchịkwa maka ịzụ ahịa kwuru.
N'ime izu abụọ na-esote, ndị na-ahụ maka ahịa ahịa Seychelles Tourism, na ndị nnọchi anya si n'akụkụ ụwa niile ga-ewetara ndị otu azụmaahịa mpaghara na obere otu ma ọ bụ nzukọ otu na otu atụmatụ na atụmatụ ha maka afọ 2022.
A na-akwado nnọkọ niile site n'aka Director-General for Marketing Mrs. Bernadette Willemin bụ onye onye njikwa ahịa na ndị nnọchiteanya ga-enyere aka. Nzukọ a ga-akwụsị na Fraịde, Febụwarị 4, 2022.
IATA: Ndị njem na-achọ mgbake na-aga n'ihu na 2021 mana Omicron nwere mmetụta
Ndị ọbịa mba ụwa jiri ijeri $10.1 na USA...
Jenụwarị 29, 2022 na 05:54
Ekwenyere m na gị. N'ihi na ịchọrọ ịkwado echiche ọhụrụ na ndị batara ọhụrụ na njem nlegharị anya. Hey, nnukwu akụkọ, ngwa ọrụ ndị a niile n'efu bụ nnukwu nhọrọ nke nwere ike inyere obere azụmaahịa aka.